Maxaa loo malaynayaa in Xasan Cali ku waayay jagadiisa yaase ku faraxsan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxaa loo malaynayaa in Xasan Cali ku waayay jagadiisa yaase ku faraxsan
Waxa maanta si lama filaana kalsoonidii loogala noqday raiisal wasaare Xaan Cali Kheyre oo xukuumadiisa lagu xasuusto inay dhaqaajisay deyn cafinta inkastoo ayna wax horumara ka samayn dhinaca shaqo abuurka guud ahaan dalka.
”Waxa jira kobac dhaqaale ee ay keentay deganaanshaha dawladnimo ee ay keentay wadashaqaynta ka dhaxaysay raiisal wasaare Casan Cali iyo madaxweyne Farmaajo, waxase farogelin xun ku hayay kooxda beesha caalamka ayuu yiri Cali Calasow.
”Waxa hubaala in Xasan Cali jagadiisa ku waayay ka dulboodka barlamaanka inkastoo aan shaki ku jirin in beesa garanayn kaalinta madaxweynaha ku leeyahay.
Xukuumada Xasan Cali oo lagu eedeeyay inay ka gaabisay dhinaca doorashada oo kooxda beesha caalamka aad u danaynaysay, ma jirin wax taageero ah oo uu ka helay kooxdaas hadday noqoto dhaqaalaha ku baxaya nidaamkooda.
Inkastoo Xasan Cali uu ka soo jeedo beesha Hawiye haddana Hawiye badankiisa waa diidey siiba beesha degta Muqdisho hareeraheeda oo iyagu qaba inay kursigaa ama ka madaxweynaha iyagu leeyihiin, waxayna bilaabeen olole dhicis isla markiiba noqdey oo qabyaaladeysan.
Hadda uu xukunkii laga tuurey waa aamuseen durbaba waxayna rajaynayaaan in iyaga markale lagu celiyo, halka ummada kale sugayaan in bal markan raiisal wasaasre kala guura loo magacaabo beesha DIR ama beesha shanaad.
Beesha Hawiye oo ka cabsi qabta in laga wareejo raiisal wasaaraha ayaa duqeydoodu ka soo saareen war ay ku leeyihiin kuna taageerayan in barlamaanka lagala wareego talada dalka.
Si kastaba ha ahaatee Xasan Cali wuxuu ahaa shaqsi ka soo baxay shaqada inta uu awoodo, maalmihii u dambeeyayna wuxuu booqdey Qadar halkaas oo la sheegayo inuu kiish lacago ah soo xaabsaday. Wuxuuna furan karaa xisbi isagoo ku faanaya waxqabadka kooban ee uu Xamar ka sameeyay.